एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित भयो - Lekhapadhi मुख्य समाचार : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी २७ बैशाख २०७८, सोमबार ११:२४ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सोमबार बसेको भर्चुअल बैठकले परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । दिनाप्रतिदिन कोरोना महामारी बढ्दै गएकोले यस वर्षको एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित भएको हो।
‘कोरोना महामारीका कारण परिस्थिति जटिल बन्दै गइरहेकाले परीक्षा गराउन सम्भव नभएपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्म परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले बताएका छन् ।
अबको १५ दिनभित्र बोर्डका सदस्यहरुले परीक्षा मोडल तयार गरेर बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने र त्यही अनुसार परीक्षा मोडल सार्वजनिक गर्ने डा. पौडेलले जानकारी दिए । अब बन्ने नयाँ परिक्षा मोडेल अनुरुप परिक्षा गरिने जनाएको छ ।